192.168.8.1 - Bogga 2 ee 8 - Admin Login
The https://192.168.8.254 Cinwaanka IP wuxuu ka diiwaangashan yahay IANA Lambarka Lambarrada Internetka ee loo qoondeeyay ee IANA sida saami ku leh shabakadda fog 192.168.8.0-24. Meel gaar ah, cinwaanada IP-ga looma qoondeeyo ganacsi gaar ah qof walbana wuu isticmaali karaa cinwaanada IP-ga oo ka madhan ansixinta diiwaanka gobolka ee internetka sida lagu muujiyey RFC 1918, oo ka duwan cinwaanada IP-ga.
192.168.8.254 Soo gal
Deuter Router IP Default 192.168.8.254
Waa login default IP kaas oo loo haysto modem ama router wireless. Waxaad heli doontaa gelitaanka khadka maamulka ee router adiga oo furaya 192.168.8.254 gudaha bar cinwaanka biraawsarka. 192.168.8.254 waxaa badanaa adeegsada sumadaha sida D-Links. Kaliya maahan IP-yada caadiga ah router-yada. Waxaa jira tanno badan oo IP-yada ah tusaale ahaan 192.168.0.1, 192.168.2.1, or 192.168.1.1, kaas oo loo isticmaalo ku soo dhowaanshaha albaabbadaada VoIP, koontaroolada xakamaynta. IP-ga caadiga ah waxaa xitaa loo yaqaan 'Default IP Gateway'.
Dadweynaha oo dhami kama war qabaan routerkooda IP-da maadaama dhacdooyinka intooda badan ay jiraan hal meel oo ay tahay inaad galiso IP-ga 192.168.8.254. Tani waa meesha nidaamka dejintu uu hirgeliyo hawl wade. Kadibna, xiriir lamahelaysid 192.168.8.254. Si kastaba ha noqotee, marwalba marwalba waa inaad bedeshaa SSID (magacyada shabakadaha WiFi), xakameynta waalidka, ama WiFi-Passwords. Markaas waxaad dooneysaa ka 192.168.8.254 IP. Soo galitaanka ka dib routerka waxaad ku arki doontaa darbiyada hagaha halkan waxaad awood u leedahay inaad maamusho taraafikada xogta, fahamto tirakoobka & dhisida habka router.
192.168.8.254 asal ahaan waxaad ubaahantahay furaha http://192.168.8.254 biraawsarka & tan ayaa kugu hagaajin doonta soo galitaanka bogga ee qeybta maamulkaaga. Waxaad si fudud dib ugu habaynaysaa modem-ka xarunta warshad haddii aad ka shakisan tahay PW ama aad la kulanto wax kasta oo khaldan oo ku saabsan PW-gaaga.
Dib-u-dejinta PW ee 192.168.8.254?
Waxa kaliya ee lagaa rabay inaad sameyso waa inaad dib u dejiso modemyada. Tan waxaa si fudud loogu samayn karaa adigoo gujinaya furaha dib udajinta ee ugu dambeeya ama salka modemyada. Si fudud hoos ugu riix daqiiqad-wareejintan 20 sekano oo ku saabsan, (waxaad u baahan kartaa inaad isticmaasho buraash caday), ka dibna modemka ayaa laga yaabaa inuu dib ugu soo noqdo goobtii warshadda
Maxay tahay inaad maskaxda ku hayso waa inaad mar uun dib u dejiso modemka, waxaad waayi kartaa xiriirkaaga khadka tooska ah. Sidaa awgeed way fiicantahay in la qaato caawimada iyo talooyinka shaqaalaha khibrada leh ee dhibaatadan la soo gudboonaada. Haddii aadan haysan macluumaad badan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka kasbato taageero qof leh macluumaadka noocan ah.
192.168.8.254 Cinwaanka IP-ga waa cinwaan IP shaqsi ah. Cinwaanka IP-ga ee fog waxaa loo isticmaalaa shabakadaha maxalliga ah (LAN) gudaha waana laga arkaa internetka. Cinwaanka fog ee IP-ga waxaa lagu sharaxay 1918 (IPv4) RFC iyo sidoo kale 4193 (IPv6) RFC.
IP gaar ah 192.168.8.254 waxaa loogu talagalay soo celinta guddiga maamulka kombiyuutarka. Dhamaan IP-yada kale sida 192.168.0.99,192.168.8.1, 192.168.4.1, iwm ayaa isla mar loo aqbalaa router IPs caalami ah. Xitaa waxaa lagu qeexay suugaanta "Default IP Gateway."
Mid ayaa la tacaali kara doorashooyinka amniga si dhammaystiran, DNS, wakiil, LAN, WAN, Maareynta Shabakadda, dejinta WLAN, WPS block ADSL, DSL, MAC, IP QoS, iyo wax intaa ka sii badan.
Liiska Magaca Isticmaalka & Furaha Macquulka ah
D-Link (midna) admin
D-Link (midna) gaarka ah
D-Link (midna) dadweynaha
D-Link admin (midna)